Dhammaan Ku Saabsan Magaca Farshaxanka iyo Riwaayadda
Diinta & Ruuxnimada Aasaaska
Romani Magic iyo Folklore
In dhaqamada badan, sixirku waa qayb muhiim u ah nolol maalmeedka. Kooxda la yiraahdo Rom waa ay ka reeban yihiin, waxayna leeyihiin hanti aad u xoog badan oo qani ah.
Ereyga ereyga ayaa mararka qaarkood loo adeegsadaa, laakiin waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid xayawaan leh. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ereyga loo adeegsaday ereyga asal ahaan loo isticmaalo deriska si loo tixraaco kooxaha asal ahaan loo yaqaano Romani. Romani waxay ahaayeen - oo sii wadaan - koox ka socota Bariga Yurub iyo suurto galka woqooyiga Hindiya.
Ereyga "caqabada" ayaa ka yimid fikradda qaldan ee in Romaanku ka yimid Masar halkii ay ka ahaan lahaayeen Yurub iyo Aasiya. Ereyga dambe ayaa noqday mid musuqmaasuq ah waxaana lagu dabaqay kooxo safarro ah oo reer miyiga ah.
Maanta, dadka Roomaanku waxay ku noolyihiin meelo badan oo Europe ah, oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska. Inkasta oo ay weli la kulmaan takoorid baahsan, waxay maamushaa in badan oo ka mid ah dhaqamada suugaanta iyo fanka fanka. Aynu eegno qaar ka mid ah tusaalooyinka Roomaaniga ah ee ku dhammaaday da'da.
Folklorist Charles Godfrey Leland waxa uu baranayey Rom iyo halyeeyadoodii, waxayna si aad ah ugu qoraan mawduuca. Leland wuxuu u sheegay in wax badan oo ka mid ah jilaankii caanka ahaa ee Romani ay u heellan yihiin codsiyada dhabta ah - jacaylka jacaylka , soo jiidashada, soo celinta hantida la xaday, ilaalinta xoolaha, iyo waxyaabo kale oo noocaas ah.
Leland ayaa sheegaysa in mid ka mid ah xidigaha Hungarian (terminaalkiisa), haddii xayawaan la xado, burcaddeeda ayaa loo tuuray dhinaca bari iyo ka dibna galbeedka, iyo dhiirigelinta, "Meesha qorraxda aragtaa, markaa igu soo noqo!" Ayaa lagu yiri.
Habase yeeshee haddii xayawaan lamadegaan ahu waa fardoolaji, sayidkuna wuxuu qaadan doonaa dhafafkiisa, oo wuxuu u yiqiin kan ugu weyn, oo wuxuu yidhi, Yaa sayidkiisii ​​u leexday, wuuna bukooday, oo xooggiisiina ma joogsan karo. Dhegtii ii soo celi, Oo xooggiisuna waa sidii markii qorraxdu sii dhacaysay.
Waxaa sidoo kale jira aaminaad haddii aad raadineysid alaabo la xaday, oo aad la kulantid laamaha cawska ah ee aad isku qurxisay, waxaad qaadan kartaa burqada oo aad u isticmaashaa "ku xidho nasiibkii tuugada."
Leland wuxuu sharaxayaa in Rooma uu yahay rumaystayaal xoogan oo ku saabsan xijaabka iyo talisyada, iyo walxaha lagu qaato jeebka midka ah - dhuxul, dhagax - waxa lagu soo bandhigaa dabeecadaha qofka wax soo qaadaya. Waxa uu tilmaamayaa kuwan "ilaahyada jeebka," iyo wuxuu sheegayaa in shayada qaarkood ay si toos ah u siiyeen awooda weyn - muraayadaha iyo mindiyaha gaar ahaan.
Qaar ka mid ah qabaa'ilka Rooma, xayawaanka iyo shimbiraha waxaa lagu tiriyaa awoodaha leexashada iyo sheegista. Maqaarka ayaa u muuqda inuu caan ku yahay buqarradan. Waxaa loo tixgeliyaa kuwa keena nasiib, iyo badanaaba marka liqitaanka ugu horreeya la arko xilliga gu'ga, khasnadda waa in la helaa. Noocyo sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa mid caqli leh - dhirta farasku wuxuu ka ilaalin doonaa cirridka gurigaaga.
Biyaha waxaa loo tixgeliyaa inay tahay il awood weyn leh, sida uu sheegay Leland. Wuxuu nasiib u leeyahay in uu la kulmo haweeney siddoo buuxa oo biyo ah, laakiin nasiib xumo haddii burqadu madhan tahay. Waa caadada ah in lagu bixiyo cibaadada ilaahyada biyaha, Wodna zena , ka dib marka la buuxiyo boombalada ama baaldi adigoo daadinaya dhowr dhibcood oo dhulka ku yaalla sida qurbaan ahaan. Dhab ahaantii, waxaa loo arkaa qallaf - iyo xitaa khatar - in la cabbo biyo aan lahayn marka ugu horeysa bixinta abaalmarinta.
Buuggii Gypsy Folk Tales waxaa lagu daabacay 1899, iyadoo Francis Hindes Groome, oo ah casriga Leland.
Groome wuxuu tilmaamay in ay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka mid ah kooxaha lagu calaamadiyay "Gypsies", qaar badan oo ka yimid waddamo kala duwan. Groome waxa uu kala soocay Gypsies Hungarian, Gypsies, iyo xataa Scottish iyo Welsh "tinkers."
Ugu dambeyntii, waa in la caddeeyo in magicii Romani ugu badnaa oo kaliya uusan ku jirin dhaqanka dhaqanka, laakiin sidoo kale ku jira bulshada guud ahaan Romani. Blogger Jessica Reidy wuxuu sharaxayaa in taariikhda qoyska iyo aqoonsiga dhaqameedku ay door muhiim ah ka cayaaraan sixirka Romani. Waxay tiri: "Dhamaan qosolkaygii Roomaniga waxa aan ku maalgeliyay anigaygaygii iyo waxa ay i bari jirtay, iyo aqoonsigeeda ka timaada waxa ay qoyskeeda u gudbin karto iyada oo isla mar ahaantaana ay qarsoodi karto jinsiyadooda iyo daadinta dhaqankooda, iskuday inay ka fogaato qolalka gaaska ama rasaas oo godad badan.
Waxaa jira tiro buugaag ah oo laga heli karo bulshada Neopagan oo u dhiganta inay bartaan "Gypsy magic," laakiin tani ma aha mid sax ah oo ah magacyo dhab ah. Si kale haddii loo dhigo, qof aan Romani ahayn in uu suuqa ka iibsado muusikada iyo cibaadada kooxdan gaarka ahi waa wax aan ka yarayn dhaqameedka dhaqanka - sida marka dadka Maraykanka ah ee aan Hindida ahayn ay isku dayaan in ay suuq galiyaan dhaqanka Native American. The Romans waxay u muuqdaan in ay u arkaan qof kasta oo aan Romani ahayn sida kuwa ugu fiican, iyo ugu xun, sida shakhsiyaad iyo khiyaano.
Ciyaalka Musqulaha ee Musqusha ee Carruurta
Waa maxay Shabbatu?
Samee Muraayada Daqiiqada
Waa maxay Midrash ee diinta Yuhuudda?
Waa maxay xiddigta Daa'uud ee diinta Yuhuudda?
Isdhaafinta Yuhuudda ee "Ilaah" sida "Gd"
Liiska Akhriska ee Ragga
Mortar iyo Pestle
Pagan iyo Wiccan Festival Etiquette
Dhacdooyinka Caadiga ah
Toban Bukaan oo caan ah: Halkee ay ka yimaadeen; Waxa ay matalaan
Natiijooyinka WWF PPV 2001
Xumayn, Calumny, iyo Fr. John Corapi
Sidee loo Dhaqaa Mawjadaha Hoose ee yar
200 Ereyada Qudheeynta Ereyada ah
'Xeerka Da Vinci' by Dan Brown: Dib u eegista Buugaagta
Freyja - Goddess of Vundance, Fetility iyo War
Maxay yihiin xiddigo iyo intee le'eg ayeey ku nool yihiin?
Waxaad u maleyn kartaa in aabaha aabeha ah uu yahay Spider
Jaamacadda Nova Southeastern Admissions
Dhaqdhaqaaq Jilaa ah - Dhalinyarada
Ugu sareeya 10 Dugsi ee Maraykanka ee raadinta dhirta qoyskaaga
Fasalka Saddexaad Fasalka Reiki Fasalka Syllabus
Xeerka Wadada Kaliya 'Rule ee Koorsooyinka Golf
Dagaalkii sokeeye ee Mareykanka: Dagaalkii Pea Ridge
Horumarka Hore ee Nazi Party
Sherman Mills Fairchild - Gawaarida Duramold - Goosha Spruce
Sidee Biyuhu u Wadi Doonaan Waaq ama Dhiiga
Shirkadda Christopher Radko Shirkadda
Baro sida loo sameeyo Tilki Shinida ah
Ogolaanshaha Jaamacadda Otterbein
Arag Dhismaha Ugu Fiican ee Spain
Maxay ahayd Donatism iyo Maxay Deeqayaashu rumaysan yihiin?
Ku dhigista Microsoft khariidada